Is-Qabqabsigii oo dib u billowday? | Keydmedia
Is-Qabqabsigii oo dib u billowday?
Muqdisho (KON) - Is-Qabqabsigii iyo Khilaafkii oo dib u billowday: Macluumaad ay heleyso KON ayaa sheegaya in Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kasoo horjeestay go’aankii Golaha wasiirrada ay shalay xilka uga qaadeen Agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda Qaranka, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe.
Warkaan oo aan ka heleyno Xildhibaanno u dhow Madaxweynaha ayaa sheegay in Madaxweynaha iyo Raisul Wasaaraha ay isku khilaafsanyihiin Xil ka qaadistii Agaasimaha Hay’adda Nabadsugidda Qaranka, Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe.
Xildhibaankaan u waramay KON ayaa sheegay in Madaxweynaha uu ka xumaaday Xil ka qaadistii Sanbaloolshe, isagoo aan lagala tashan, wuxuuna Xalay Villa Somalia kula kulmay Xildhibaanno iyo Wasiirro. "Waxaad moodaa in Is-qabqabsigii dib losoo celiyay" Ayuu yiri Xildhibaankaan noo waramay.
Sanbaloolshe 'Sharciga dalka' ayuu ku xadgudbay
Warar Hoose oo Keydmedia Online ka heshay Xafiiska RW C/weli ayaa sidoo kale sheegaya in Sanbaloolshe Xilka loogu qaaday Khilaaf u dhaxeeya Madaxweynaha & Ra'iisul Wasaaraha.
Golaha Wasiirrada ayaa Shalay ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen Agaasimihii Nabadsugidda, waxeyna Keydmedia Online Warkaasi soo qortay inta aan si rasmi ah loo shaacin.
C/llaahi Sanbaloolshe, ayaa mar soo noqday Safiirka Soomaaliya ee UK wuxuuna xilka hayaa Labo Bilood oo kaliya. Waa Taliyhii 3-aad oo Xilka laga qaado tan iyo markii uu Xasan Sheekh Madaxweyne noqday.
Madaxweynaha ayaa iska leh go'aanka ugu dambeeya, laakiin hadii uu Madaxweynaha ku adkeesto go'aankiisa, arintaan ayaa la hubaa in ay keeni doonto Khilaaf Cusub.
Dhanka kale, Xildhibaan C/ladhiif Muuse Sanyare, oo kamid ah Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in C/llaahi Sanbaloolshe uu ku xadgudbay Sharciga dalka u yaalla, kadib markii uu Xabsiga dhigay Xildhibaan Qaran, oo Dastuurka uu dhigayo in aan lagu xadgubdi karin.
"Xildhibaan Qaran haddii uu Denbi galo la iskama xiri karo, iyadoo aan loo soo marin Xeerka dalka. Baarlamaanka Federaalka waxuu leeyahay Gudi Anshax & Gole xaqdhoriyaal, kuwaasi ay kasoo gudbin kari Warbixinta Denbiga uu galay," ayuu yiri Xildhibaan C/ladhiif Muuse Sanyare.